Vaovao - Voahangy fotsy vs voahangy miloko
Ny perla koa manana loko miloko. Na dia mbola tsy namarana tanteraka ny antony mahatonga ny fandrafiana loko amin'ny perla miloko aza ny olona, ​​dia azo fintinina amin'ny lokon'ny perla fa ny lokon'ny perla dia manana fifandraisana lehibe amin'ny renin'ny perla izay miteraka azy ireo. Ny Voahangy avy any atsimo dia matetika vokarina amin'ny molotra volamena, fa ny perla mainty kosa dia vokarina amin'ny akorandriaka molotra mainty.
Ny perila mahazatra antsika dia fotsy avokoa, koa maro ny olona mieritreritra firavaka perila fotsy rehefa miresaka voahangy izy ireo. Raha ny marina dia nofinofy fotsiny izany. mavokely sy volomparasy dia fahita any amin'ny voahangy amin'ny rano velona vao haingana.
Ny loko dia nanjary maro loko kokoa noho ny fandrosoan'ny teknolojia fambolena perla. Ny loko manan-danja indrindra hisafidianana dia miankina amin'ny safidin'ny tena manokana, saingy azafady mba diniho ihany koa raha voajanahary sy mazava ny lokon'ny perla, ary aza mividy perla miloko.
Kavina Stud Perla, Voahangy Rano voajanahary, Voahangy fotsy mangatsiaka fotsy, Fehiloha Voahangy Volafotsy Sterling, Aaa Voahangy Rano, Fanomezana Bridesmaid Voahangy Rano,